Lammileen Itoophiyaa biyyoota adda addaa jiraatan waa'ee mirga hojjataa maal jedhu? - BBC News Afaan Oromoo
Lammileen Itoophiyaa biyyoota adda addaa jiraatan waa'ee mirga hojjataa maal jedhu?
Guyyaan dafqaan bultoota addunyaa kaleessa addunyaa gutuutti kabajamee oleera. Haa ta'u malee ammas hojjattoonni lammiilee Itoophiyaa bakka garaa garaatii waa'ee kabajama mirgaasaanii dubbachaa jiru.
Keessattuu yaada humna hojjataa rakasatuu Itoophiyaa keessa jira jedhu akka hinfudhanne waajjirri dhimma hojjataafi Hawaasummaa Oromiyaa BBC'tti himeera.
Pirezidaantiin Konfidareshiinii Itoophiyaa Obbo Kaasaahun Foloo gama isaanitiin hojjattoonni mindaasaaniin jiraachuu waan dadhabaa jiraniif, ka'umsii mindaa akka fooyya'uuf mari'achaa jirra jechuun dubbatu.
Haa ta'u malee mirgi hojjattootaa haala garaa garaatiin sarbamaa jiraachu lammilee ni dubbatu.
Biyyoota lammiileen Itoophiyaa baay'inaan keessa hojjataa jiran keessaa Saawudi Arabiyaan tokko. Lammiin Itoophiyaa kan taateefi ammaan tana achi hojataa kan jirtuu Haawiin BBC'tti akka himteetti, hojattoonni akka ishee mirga omaa hinqaban.
Kan biraa hafee qaamni motummaa yoo miidhaafi sarbamni miragaa isaa irra gahutti itti iyyachu danda'an hinjir. Kamumaan walqabatees namoonni hedduun rakkinaafi du'aaf saaxilamu isaanii Haawiin ni dubbatti.
''Walumaagalatti haalli asi jiru baayyee rakkisaadha'' jetti Hawiin.
Jiraataa biyyaa Kaanaadaa kan ta'an lammiin Itoophiyaa kan biraa obbo Mazigabu Abdiisaa ammo faallaa yaada Hawii, biyyichi mirga maatiif eddo olaantummaa kan itti kennamu ta'usaafi mirgi namoota hunda akka kabajamu himu.
Haa ta'u malee, lammiileedhumitu biyya keessa jiraan keessaa isaan BBC dubbise, migri isaanii haala garaa garaattiin kan sarbamu ta'u himu.
Ittaanaa ogganaa Biiroo hojataafi hawaasummaa Naannoo Oromiyaa kan ta'an Obbo Balaayi Taaddalaa Naannoo Oromiyaa keessa invastimantii waan jiruuf komiin hedduun jiraachu himu.
Dhimma humni rakasaatu biyya Itoophiyaa keessa jiru jedhu irrattis ''humni keenya qabeenyaa keenya waan ta'eef humni dargaggeessaa inni homshu danda'u rakasa osoo hintaane, human baay'ee barbaadamaadha,'' jedhaniiru.
Haa ta'u malees sochii invastimantii naannicha keessatti bal'inaan gaggeefamaa jiru irraa hawaasichi hanga ammaatti baay'ee akka hinfayadamiin illeen himaniiru.
Hojjataa fayyadamaa taasisuuf, hanqina gama oggansaatiin tureen alattis hanqinni seeraa jiraachusaa Obbo Balaayi ni himu.
Haaluma walfakkaatunis Pirezidaantiin Konfidareshiinii Itoophiyaa Obbo Kaasaahun Foloo labsii hojataafi hojjachisaa haraan akka waliin hingallee dubbatu.
Dhimmoonni akka ka'umsa miindaafi boqonnaa waggaa irratti mootummaan waan irratti waliin hingallees marii taasisaa jiraachusaanii BBC'tti himaniiru.
Yoo gaaffiin isaanii kun fudhatama dhaba ta'ee hiriiraa bahuufi hanga gutummaa biyyaatti hojii dhaabuuf illeen yaadaa jiraachusaanii dabaluun himaniiru.